Tokkummaan Mootummootaa Weerarri COVID-19 Uummata Miliyoona 32 Hiyyummaa Hamaaf Saaxiluu Mala Jedhe
Hoogganoonni addunyaa 100 ol ta’anii fi angawoonni mootummaa sadrkaa ol aanaa sadarkaa addunyaatti duula COVID-19tti geggeeffamuuf deebii kennuu akkasumas akkasumas tarsiimoo dandammachiisaa qopheessuuf jecha wal ga’ii addaa kan gumii tokkummaa mootummootaa vidiyoo dhaan geggeessuuf jiru.
Prezidaantii gumii sanaa Volkaan Bozkiireef dubbi himaa kan ta’an Brendan Varmaa akka jedhanitti kayyoon wal ga’ii addaa kun kan fuuleffate biyyoota, tokkummaa mootummootaa, waaltaalee dhuunfaa, kampanilee talaalii oomishan gidduutti gidduutti tarsiimo gamtaa qopheessuuf akka ta’e beekamee jira.
Assoicated Press akka gabaasetti wal ga’iin lammataa fi xumuraa kan jimaata dhuftuu mata duree sadii irratti fuuleffata. Qaamni addunyaa weerara kanaaf deebii inni kennu, talaallii vaayiresii koronaa ilaalchisee fooya’ina amma argamee fi sababaa weerara kanaan dandammachiisa dinagdee addunyaa ka jedhu.
Sagantaan misoomaa kan tokkummaa mootummootaa qorannaa ifa godheen weerarri COVID-19 uummata itti dabalaa miliyoona 207 hiyuummaa hamaaf saaxiluu mala jechuun kan tilmaame yoo ta’u, kunis lakkoobsi kun bara 2030tti gara biliyoona tokkootti ol guddachuu mala. Gabaasi ka biroon tokkummaa mootummootaa ba’e biyyoonni 50 guddataa jiran waggoota 30 itti aanu keessa rakkoo dinagdee hamaan isaan mudatuuf jira jedhee jira.
Wal ga’iin kamisa har’aa kan dhaga’ame ennaa uummanni naannoo addunyaa miliyoona 1.5 ta’an COVID-19n dhumanii kanneen miliyoona 64.5 ta’an duanitti. Yunaayitid Isteetis keessaa namoonni miliyoonni 13,9 COVI-19n yoo qabaman kanneen 273, 836 du’aniiru.
Ennaa Duula Filannoo Gaanaa COVID-19 Tamsa’uu Mala Sodaa Jedhu Uume
Gareen IS Kan Naayijeeriyaa Keessaa Hojjetaa Gargaarsaa fi Angawoota Naannoo Ukkaamsee Butuun Gabaasame
Jaarmoliin Gargaarsaa Naannoo Tigraayiif Gargaarsa Erguuf Qophaa’uu Beeksisan